बढ्दो उमेरसँगै उच्च रक्तचापको समस्या - Health Today Nepal
बढ्दो उमेरसँगै उच्च रक्तचापको समस्या
August 28th, 2018 बिशेसज्ञ लेख0comments
डा. हिक्मत रावल,
उच्च रक्तचाप भनेको यस्तो अवस्था हो जसमा रगत प्रवाह हुने रक्तनलीहरूमा चाप बढी हुने गर्दछ । यसले गर्दा रक्तनलीहरूमा क्षति पुग्दछ र ती रक्तनलीहरू बन्द हुने सम्भावना बढाउँछ । अधिकांश बिरामीहरूलाई बढ्दो उमेरसँगै उच्च रक्तचापको समस्या हुने गर्दछ । केही अन्य समस्या जसमा उच्च रक्तचाप कम उमेरमै देखिन थाल्छ । यसको कारण अरू नै हुन सक्दछ, जस्तैः मिर्गाैलासम्बन्धी रोग, हर्मोनको गडबडी वा लामो समयसम्म स्टोरराइडजस्ता औषधिको सेवन हुन सक्छन् । कम उमेरमै हुने उच्च रक्तचापको कारणलाई सुधार्न सकिन्छ ।
उच्च रक्तचापका लक्षणहरू निम्न प्रकारका छन् :
१. अधिकांश बिरामीहरूमा उच्च रक्तचापको कुनै पनि लक्षण नदेखिन सक्छ । यसै कारण यो रोगलाई थाहा नहुने मृत्युको कारक पनि भन्ने गरिन्छ ।
२. जब रक्तचाप धेरै बढेको हुन्छ, तब टाउको दुख्ने, नाकबाट रगत बग्ने वा चक्कर लाग्ने हुन सक्छ ।
३. लामो समयदेखि उच्च रक्तचापको बिरामीमा रक्तचापका कारण विभिन्न जटिलताहरू जस्तै : मुटुरोग वा मिर्गौलासम्बन्धी रोग वा पक्षघात पनि हुन सक्छ ।
४. तपाईंको परिवारमा यदि कोही उच्च रक्तचापबाट ग्रसित छन् भने तपाईंलाई पनि यो समस्या हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । यसका साथै कम शारीरिक क्रियाकलाप, बढ्दो तौल, रगतमा बढ्दो चिल्लोपना, धूमपान गर्नाले वा मधुमेह रोगले उच्च रक्तचाप हुने जोखिम बढाउँछ ।
५. उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न औषधिहरू उपलब्ध छन् । त्यसमध्ये चिकित्सकले तपाईंको आवश्यकताअनुसार कुनै औषधि छनोट गर्न सक्नु हुनेछ ।
रक्तचापको दीर्घकालीन नकारात्मक असरहरूबाट बच्न यी औषधिहरू नियमित रूपमा सेवन गर्न जरुरी हुन्छ ।
(क) आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछः
१. सन्तुलित आहारमा बढी जोड दिनुका साथै आफ्नो स्वस्थ तौललाई कायम राख्नु पर्दछ ।
२. खानामा नुनको प्रयोग कम गरी फलफूल, सागसब्जी र दूधबाट उत्पादित चिल्लो कम भएका सामग्रीहरूको उपभोग प्रशस्त मात्रामा गर्नु पर्दछ ।
३. नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्दछ (हप्ताको कम्तीमा पाँच दिनसम्म हरेक दिन छिटो हिँड्ने, कमसे कम ३० मिनेट पौडी खेल्नु राम्रो हुन्छ ।)
४. धूमपान गर्नु हुँदैन ।
(ख) समयमै चिकित्सकसँग परामर्श लिनु पर्दछ । पूर्ण शारीरिक जाँच र उचित परीक्षण गराउनुपर्दछ । प्रायःजसो उच्च रक्तचापबाहेक अन्य असामान्यताको पहिचान हुँदैन ।
(ग) नियमित रूपमा दिनहुँ औषधि सेवन गर्नु पर्दछ । अन्यथा ती औषधिहरू लाभदायी हुने छैनन् ।
(घ) उच्च रक्तचापका बिरामीले आफ्नो रक्तचापको नियमित जाँच गराइराख्नु पर्दछ र साथै चिकित्सकको निर्देशनअनुसार समयसमयमा स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्दछ । यसो गर्नाले तपाईंको रक्तचाप कतिको घटेको वा बढेको छ भन्ने कुरा जान्न सकिन्छ र सोही अनुरूप चिकित्सकले औषधिको मात्रा समायोजन गर्नेछन् ।
(ड) चिकित्सकको सल्लाह बिना तपाईं औषधि सेवन गर्न नछोड्नुहोस् ।
Previous article प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी देखाएर सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाइने
Next article २८ प्रतिशत बालबालिका र १८ प्रतिशत किशोरीमा सुक्ष्मपोषण तत्व आइरनको कमी